Amanyathelo okukhuthaza: IDielmoOpenLiDAR -Geofumadas
Ikhaya/GvSIG/Ukukhuthaza amanyathelo: iDielmoOpenLiDAR
Ukukhuthaza amanyathelo: iDielmoOpenLiDAR
Ago iintsuku ezimbalwa ndathetha yemizamo eyenziwayo ngokwe-LIDAR yolawulo lwedatha, ke namhlanje ndidlulisa ingxelo esesikweni epapashwe yi-DIELMO 3D SL
I-DielmoOpenLiDAR: Iprogram entsha entsha yokuphatha idatha ye-LIDAR
Kuba kwiminyaka 5 eyadlulayo DIELMO 3D SL sele usebenza ekuphuhliseni software nokuhlawulwa data LiDAR, besebenzisa oko ngaphakathi ekuveliseni Models Digital sezwe (DTM) kwiiprojekthi ezininzi, ukufumana umgangatho ophezulu kunye ngqo kwi imveliso yokugqibela kunokuba zinikwe nge-software yesorhwebo njengamanje ekhoyo kwimarike.
Kude kube kamva nje, injongo yethu ukuba kunjalo sicwangcise software yethu LiDAR lweenkcukacha ukususela ekuqaleni ukuyenza i software yorhwebo ojolise ababoneleli data,, kunye ngoncedo CIT baye bagqiba ekubeni bathathe inyathelo ukuphuhlisa isofthiwe esitsha samahhala ekuqhutyweni kwedatha ye-LiDAR ejoliswe kumsebenzisi wokugqibela, phambi komgca wendabuko ugxile kwi-software yezorhwebo.
Ekugqibeleni, ngoncedo lweSebe leZibonelelo kunye noThutho lwe-Generalitat Valenciana (CIT) sinqume ukuthabatha isinyathelo sokudala i-DielmoOpenLiDAR
I-DielmoOpenLiDAR iyisofthiwe ekhululekile nelayisenisi yeGNU GPL esekelwe kwi-gvSIG yokusingatha idatha ye-LiDAR. Ngeli xesha siye savelisa uMqhubi wokufikelela kwiDiDAR yedatha kwi-gvSIG. Lo mqhubi uyisiseko sokusingatha idatha kwiifom eziqhelekileyo, ukwenzela ukuba i-gvSIG inikwe izixhobo ezisisiseko ezivumela abathuthukisi ukuba basebenze kunye ne-LIDAR idatha ngendlela ebonakalayo elula kwaye elula. Kwelinye icala, abasebenzisi gvSIG ukuvula data yoqobo LiDAR (i-LAS kunye bin) baya kuvunyelwa, umboniso lwenziwe kulo naluphi na olunye ulwazi ngokwezelizwe, dibana amaxabiso zatanci zenkqubo nganye kwezi ngongoma kunye nohlelo.
Emva kokuba iziseko zentuthuko ehambelana nedatha ye-LiDAR kwi-gvSIG imisiwe, isigaba esilandelayo siya kubandakanya ukuphuhlisa zonke izixhobo eziyimfuneko ukuba zikwazi ukwenza ukusetyenziswa kwedatha ye-LiDAR epheleleyo ne-gvSIG. Ngakolunye uhlangothi siya kunika i-gvSIG ngeendlela zokubala ngokuzenzekelayo kwaye ngakwelinye icala siza kuzalisekisa izixhobo zokuhlela izixhobo ezivumela ukulawulwa komgangatho kweziphumo. Kusuka kwimveliso ephambili esiya kukwazi ukuyivelisa kwisigaba sesibini seprojekthi, isigaba sesithathu sinezixhobo ezinengqiqo ekudalweni kweemveliso ezintsha zokugqibela ezixabisekileyo.
Ngophuhliso kwale software free ukulawula data LiDAR, DIELMO 3D ijolise ukuzisa ukusetyenziswa kobugcisa LiDAR abasebenzisi GIS standard kunye noluntu lwezenzululwazi, ngenjongo ekwandiseni ukusetyenziswa kwayo. Ukongeza, okwangoku kukho ukutyelela iinkcukacha ezininzi ze-LiDAR ukuba zifumaneke ezibandakanya imimandla emikhulu yentsimi, kwaye kwiminyaka embalwa ukususela ngoku yonke le ngcaciso iya kukhululeka ukuze ubani angayifikelela kuyo. Ngokomzekelo, xa data LiDAR iyafumaneka kwi-Basque Country aokusetyenziswa liBhunga lePhondo Guipúzcoa kunye Mapping Service of the Department of Environment kunye noCwangciso ye-Basque kaRhulumente.
Unyaka we-systematization ulindile
kml ukuya kwidxf -Iindlela ezintlanu zokwenza olo guqulelo
Ingqungquthela ye-15 ye-gvSIG yamanye amazwe-Usuku lwe-2
Iindaba zetekhnoloji kwiGeo-engineering-kaJuni 2019